Apple iPhone 8 အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေသိထားပြီးပြီလဲ?
23 Aug 2017 . 4:34 PM
iPhone 8 ကိုတော့ ဒီနှစ်အကုန်ပိုင်းမှာ စတင်မိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဖုန်းမှာပါလာမယ့် Features တွေကိုတော့ သတင်းမပေါက်ကြားရအောင် အထူးလျှို့ ဝှက်ထား ပါတယ်။ ဒီလို လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ကြားက အွန်လိုင်းမှာ iPhone 8 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းပေါက်ကြားမှုတွေနဲ့ ကောလာဟလတွေဟာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေကို စုစည်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
iPhone7ကို စတင်ဖြန့်ချိကတည်းက နောက်အသစ်ထွက်ရှိမယ့် iPhone 8 ရဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကောလာဟလတွေ ထွက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်း ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့သတင်းတွေအရတော့ iPhone 8 မှာ မျက်နှာပြင်ပိုမိုကြီးမားပြီး တခြားလုပ်ဆောင်ချက်တွေပါဝင်တဲ့ Ferrari Version ကိုလည်း ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီး အကောင်းမွန်ဆုံး ဒီဇိုင်းနဲ့ ပွဲထုတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ကောလာဟလတစ်ခုအရတော့ အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် သူတို့ရဲ့ဖုန်းကို Apple ဟာ iPhone 8 လို့မခေါ်ဘဲ iPhone Pro လို့ ခေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အစောပိုင်းမှာထွက်ခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေအရတော့ အသစ်ထွက်မယ့် iPhone ဟာ အရင်တုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ ခေါက်ဖုန်းတွေလိုမျိုး အလယ်ကနေခေါက်လို့ရလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဖုန်းကို လော့ခ်ဖွင့်ဖို့ အသုံးပြုသူတွေရဲ့ မျက်နှာကို Scan ဖတ်နိုင်တဲ့ လေဆာနည်းပညာကိုလည်း ထည့်သွင်းနိုင်တယ်လို့လည်း ကောလာဟလတွေ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အားသွင်းကြိုးမလိုတဲ့ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အားသွင်းခေါင်းရဲ့ ၁၅ ပေအကွာအဝေးကနေ အားသွင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ အချက်အလက်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် အပေးအယူလုပ်နိုင်မယ့် Lightening Connector ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
iPhone 8 မှာ ပါဝင်လာမယ့် 3D ကင်မရာဟာလည်း သုံးဖက်မြင်ပုံရိပ်တွေကို ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းအသစ်ဟာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ ထွက်လာမှာဖြစ်ပြီး AirPods တစ်စုံကိုလည်း လက်ဆောင်အဖြစ်ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး ကောလာဟလတွေလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အသစ်ထွက်ရှိမယ့် ဖုန်းမှာ Home ခလုတ်ပါဝင်တော့မှာမဟုတ်ဘဲ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး မှန်သားတွေနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Super Glossy OLED Infinity Screen မျက်နှာပြင်ကိုလည်း အသုံးပြုထားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဖုန်းအသစ်ကို အလုံးရေ ၂၄၈ သန်းလောက် ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ ပေါင် ၉ဝဝ လောက် ကျသင့်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကြေးနီရောင်စပ် ရွှေရောင်နဲ့ ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး လက်ဗွေရာ အာရုံခံစနစ်လည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
iPhone 8 ကိုတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ မှာ ထွက်ရှိလာမယ်လို့ မျှော်လင့်နေကြပြီး ကောလဟာလတွေအရတော့ နည်းပညာဆိုင်ရာအခက်အခဲကြောင့် အောက်တိုဘာလထဲမှာမှ ထွက်ရှိနိုင်မယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ နောက်ထပ် iPhone အသစ်ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ထွက်ရှိလာမယ့်လို့လည်း ကောလဟာလ တချို့က ပြောကြပါတယ်။
iPhone 8 ကိုတော့ ဒီနှဈအကုနျပိုငျးမှာ စတငျမိတျဆကျနိုငျဖို့ကွိုးစားနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီဖုနျးမှာပါလာမယျ့ Features တှကေိုတော့ သတငျးမပေါကျကွားရအောငျ အထူးလြှို့ဝှကျထား ပါတယျ။ ဒီလို လြှို့ဝှကျထားတဲ့ကွားက အှနျလိုငျးမှာ iPhone 8 နဲ့ပတျသကျတဲ့ သတငျးပေါကျကွားမှုတှနေဲ့ ကောလာဟလတှဟော ထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီအခကျြအလကျတှကေို စုစညျးတငျပွပေးလိုကျပါတယျ။
iPhone7ကို စတငျဖွနျ့ခြိကတညျးက နောကျအသဈထှကျရှိမယျ့ iPhone 8 ရဲ့ အခကျြအလကျတှနေဲ့ပတျသကျပွီး ကောလာဟလတှေ ထှကျနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အစောပိုငျး ပေါကျကွားခဲ့တဲ့သတငျးတှအေရတော့ iPhone 8 မှာ မကျြနှာပွငျပိုမိုကွီးမားပွီး တခွားလုပျဆောငျခကျြတှပေါဝငျတဲ့ Ferrari Version ကိုလညျး ထုတျလုပျမှာဖွဈပွီး အကောငျးမှနျဆုံး ဒီဇိုငျးနဲ့ ပှဲထုတျလာတာဖွဈပါတယျ။
ကောလာဟလတဈခုအရတော့ အသဈထှကျရှိလာမယျ့ သူတို့ရဲ့ဖုနျးကို Apple ဟာ iPhone 8 လို့မချေါဘဲ iPhone Pro လို့ ချေါမှာဖွဈတယျလို့ဆိုပါတယျ။ အစောပိုငျးမှာထှကျခဲ့တဲ့အခကျြအလကျတှအေရတော့ အသဈထှကျမယျ့ iPhone ဟာ အရငျတုနျးကအသုံးပွုခဲ့တဲ့ ခေါကျဖုနျးတှလေိုမြိုး အလယျကနခေေါကျလို့ရလိမျ့မယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဖုနျးကို လော့ချဖှငျ့ဖို့ အသုံးပွုသူတှရေဲ့ မကျြနှာကို Scan ဖတျနိုငျတဲ့ လဆောနညျးပညာကိုလညျး ထညျ့သှငျးနိုငျတယျလို့လညျး ကောလာဟလတှေ ထှကျခဲ့ပါတယျ။ အားသှငျးကွိုးမလိုတဲ့ ကွိုးမဲ့အားသှငျးစနဈကိုလညျး အသုံးပွုနိုငျမှာဖွဈပွီး အားသှငျးခေါငျးရဲ့ ၁၅ ပအေကှာအဝေးကနေ အားသှငျးနိုငျမှာဖွဈတယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။ အခကျြအလကျတှကေို မွနျမွနျဆနျဆနျ အပေးအယူလုပျနိုငျမယျ့ Lightening Connector ကို ထညျ့သှငျးအသုံးပွုသှားမယျလို့လညျးဆိုပါတယျ။
iPhone 8 မှာ ပါဝငျလာမယျ့ 3D ကငျမရာဟာလညျး သုံးဖကျမွငျပုံရိပျတှကေို ပွသပေးမှာဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးအသဈဟာ ၂ဝ၁၇ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလမှာ ထှကျလာမှာဖွဈပွီး AirPods တဈစုံကိုလညျး လကျဆောငျအဖွဈထညျ့ပေးမှာဖွဈပါတယျဆိုပွီး ကောလာဟလတှလေညျး ထှကျပျေါခဲ့ပါတယျ။ အသဈထှကျရှိမယျ့ ဖုနျးမှာ Home ခလုတျပါဝငျတော့မှာမဟုတျဘဲ မကျြနှာပွငျတဈခုလုံး မှနျသားတှနေဲ့ ဖုံးအုပျထားမှာဖွဈပါတယျ။ Super Glossy OLED Infinity Screen မကျြနှာပွငျကိုလညျး အသုံးပွုထားမှာဖွဈတယျလို့ ပွောကွပါတယျ။ ဖုနျးအသဈကို အလုံးရေ ၂၄၈ သနျးလောကျ ရောငျးခမြှာဖွဈပွီး ဈေးနှုနျးအနနေဲ့ ပေါငျ ၉ဝဝ လောကျ ကသြငျ့မှာဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ကွေးနီရောငျစပျ ရှရေောငျနဲ့ ထှကျပျေါလာမှာဖွဈပွီး လကျဗှရော အာရုံခံစနဈလညျး ပါဝငျမှာဖွဈပါတယျ။
iPhone 8 ကိုတော့ ၂၀၁၇ ခုနှဈ စကျတငျဘာလ မှာ ထှကျရှိလာမယျလို့ မြှျောလငျ့နကွေပွီး ကောလဟာလတှအေရတော့ နညျးပညာဆိုငျရာအခကျအခဲကွောငျ့ အောကျတိုဘာလထဲမှာမှ ထှကျရှိနိုငျမယျလို့လညျး ပွောကွပါတယျ။ နောကျထပျ iPhone အသဈဟာ ၂၀၁၈ ခုနှဈမှ ထှကျရှိလာမယျ့လို့လညျး ကောလဟာလ တခြို့က ပွောကွပါတယျ။